Kate Middleton na-ekwusi ike ka a mụọ nwa: gịnị mere ọchịkpa ji chọọ ya?
Kwa ụbọchị na peeji nke tabloids enwere ozi ọhụrụ gbasara ọnọdụ dị mma nke Duchess nke Cambridge. N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, ihe ọ bụla kachasị nta banyere ime afọ atọ nke onye dị elu bụ mmasị nye ndị na-akwado ya na ndị nta akụkọ. N'ụbọchị ọzọ, ọ bịara mara na Kate Middleton gosipụtara ọchịchọ siri ike iji dozie nsogbu ahụ na mgbidi obodo ya, na Kensington Palace, ọ bụghị n'ụlọ ọgwụ.
Otu isiokwu e nyefere maka oge a gbasara na peeji nke Daily Mail. Ndị na-ede akụkọ jisiri ike chọpụta na Kate rịọrọ ka o nye ya ohere ịmụ nwa, mgbe ọ na-eyiri Princess Charlotte. Ma mgbe ahụ ọ natara ezigbo nkwenye. O yiri ka n'oge a ka nwunye nke onye nketa ga-aga na njedebe.
Kedu ihe mere Kate ji gbalịsie ike maka nnyefe ụlọ? Dị ka a maara, na UK, nwanyị ọ bụla nke na-ahọrọ ụzọ dị otú ahụ iji mụọ nwa ka enyere ego ego nke £ 3000. Ọ bụ ezie na, o yighị ka ọ ga-eme ka Kate nwee nsogbu dị otú a.
Ihe niile gbasara paparazzi
Amalitere nwa nwoke na nwa nwanyị ka nwa-nwanyi nke Prince William bụrụ ihe siri ike, mana mkpuchi nke ụmụ ụmụ ụmụ eze ahụ kpasuru nne na-eto eto iwe. Ndị paparazzi nọ na-arụ ọrụ dị nso n'ụlọ ọgwụ ahụ, ha gbalịrị ịchọta Kate na ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ! Ọ bụ ya mere agụba ji chọọ ịnọ n'ụlọ eze ahụ.
"Ụgwọ" ọzọ - nkwurịta okwu ụmụaka. Prince George na nwa-nwoke-nwanyi Charlotte ga-enwe ike ileta nwa amụrụ ọhụrụ site na nke mbụ oge ndụ ya.
Ọ bụrụ na Kate ga - eme ka ndị dọkịta na eze nwanyị nye ya ohere ịmụ nwa, ọ ga - akwado ọdịnala oge ochie nke ụlọikpe nke Great Britain.
Elizabeth II n'onwe ya muru umu ya anọ n'èzí ụlọ ọgwụ, na Buckingham Palace. A mụrụ nna ya dị ebube, Queen Victoria, na Kensington Palace.
Ọ na-anọgide na-echere mkpebi nke Aesculapius na eze nwanyị na-achị achị.
Nwunye Jamie Dornan kpaliri asịrị nke ime ime
Liam Payne zutere Queen Elizabeth II na Prince Harry na Ndị Ntorobịa Na-eto Eto
Steven Spielberg jiri obi ụtọ wepụ Idris Elba dịka ọrụ Bond
Angelina Jolie boro ya ebubo na ya na ụmụ ya nwere obi ọjọọ
David na Victoria Beckham, nke megidere asịrị, agaghị agba alụkwaghịm!
Irina Sheik na - enwe mkparịta ụka banyere ime ime ya site n'enyemaka nke akwa akwa
Kate Middleton na Prince William na Canada: Ụbọchị atọ
Madonna choro njide nke Guy Ritchie
Yegor Tarabasov nyere nyochaa mgbe ya na Lindsay Lohan nọ
Kylie Jenner ere ụlọ ya dara oké ọnụ
Cristina Mendes na-eduzi nkuzi ịntanetị maka ịke ụmụ nwanyị
Ashley Olsen mebiri Richard Sachs
Tommy Hilfiger na-agbatị ihe ejiji ejiji
Kedu otu esi eji aka nke gị mee ihe dị n'ime ụlọ ahụ?
10 ndị dike na-akọ akụkọ ihe mere eme
Kedu ka esi asacha kristal iji gbaa?
Ngwongwo ndi mmadu maka nje di iche iche
Ogbugba ogwu nke nwoke
Na-agba na soda, nnu na ayodiin
Revmoxicam - injections
Onyinye maka nwa agbọghọ nke afọ 7
Echepụta mbọ aka 2016
Crocosmia - kụrụ ma lekọta
Ozi banyere ime nwa Amal Clooney wee ghọọ "ọbọgwụ"
Nwa nwanyị di ya nwuru - olee otu esi mata ya na otua o si di egwu?
Fervex - mejupụtara
Paraffinotherapy maka aka - ụzọ abụọ kacha mma maka ịme usoro ahụ
Ngwa ngwa - nsogbu na uru
Nri strawberries mgbe owuwe ihe ubi
Igwe maka steepụ - họrọ nhọrọ dị mma, nke bara uru ma dị mma
25 kacha mma funniest cat na-emejọ
Agụụ mmiri na-azụ azụ
Gypsum mbadamba aka